ရှေးလွန်ပညာရှိအား ဒုက္ခပေးခြင်း — MYSTERY ZILLION
June 2008 edited February 2010 in MZ News
MZ forum မှာ တစ်ဦးတည်းသော ရှေးလွန်ပညာရှိကြီး ကို ဝင်းဦး ခေါ် ကို DBA အား... ကောင်းကောင်းကြီး ဒုက္ခပေးလိုက်ပါပြီ... သူ့ကို Admin ရာထူးတိုးမြင့်ပေးလိုက်ပါတယ်...
ဘာကြောင့် တိုးမြှင့်ပေးရသလဲဆို ကျွန်တော်တို့ admin အဖွဲ့ဝင် ကို ပီဇီမှာ ရေဝင်ပြီး ADSL modem ပျက်သွားခြင်းကြောင့် အသစ်ပြန်လဲရန် ၁ လ စောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။ ( ကို ပီဇီအတွက်လည်း လွန်စွာ ဝမ်းနည်းပါကြောင်း ပူးတွဲကြေငြာအပ်ပါတယ် ) နောက်ပြီး ကျွန်တော် စေတန်သည်လည်း အများအကျိုးဆောင် ကိုယ်ကျိုးပြောင်တာ အားမရပဲ တိုင်းပြည်အတွက် ငါ့အချိန်ဖျက် ဖြစ်နေတာကြောင့် MZ မှာ post တင်တောင် မတင်နိုင်ခြင်း ၊ post များကို ခန့်ခွဲမှုအတွက် အချိန် မပေးနိုင်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
MZ ပေါ်မှာ sithu015 (MZ) ၊ ခွန် ၊ exiter ၊ xaz တို့ပဲ ထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားနေရပါတယ်။ တနည်းပြောရင် admin အဖွဲ့က အလုပ်ကို မလုပ်တော့သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ML ရဲ့ admin ဖြစ်တဲ့ ကို DBA ခေါ် ကိုဝင်းဦး အား admin အဖြစ်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ....
ကိုဝင်းဦးအား အောက်ပါ သီချင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်... ( ရှာမတွေ့ရင် myanmarmp3.net မှာ သွားရှာ နားထောင်လိုက်ပါ )
:65: ဤကမ္ဘာဝယ်နေထိုင်ကြတဲ့ သူငါ အပေါင်းတို့ရယ်.. အလှနဲ့ သစ္စာကို ကွယ်ပြောပြောတော့မယ်..
လှပတဲ့ ကမ္ဘာမှာကွယ် ပေါပေါလှတယ်.... :65:
ဝေး ကိုဝင်းဦး ကြီး လည်း စတင်ပြီး ဒုက္ခ ပင်လယ်ဝေပြီသာမှတ်။ ဟီး........
ကွန်ကရက်ကျူလေးရှှုင်းပါ။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ဂန်ဖလားပြူပါတယ်ပေါ့။
WoW. Congratulation . I really glad to hear that . How great news ? Bravo MrDBA . :41::41::41::41::41::41::41:
ရာထူးတိုးပီး လစာမရတဲ့ အလုပ်ကို ၀မ်းသာအားရလက်ခံပေးတဲ့ MrDBA တို့ကို အားရ၀မ်းသာ ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဗျာ။ Congratulation ပါ ခင်ဗျာ။
ဂုဏ်ယူပါတယ် MrDBA။ လူဆိုတာ အဲသလို အသုံး၀င်မှလဲ အားကိုးအားထားကြတာပါ။
ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီး ငါကွလို ့(တနည်းပြောရရင် အခိုင်းခံလိုက်မယ်ပေါ့နော်)။
ဟီးဟီး သားလဲအားကိုးပါရဂျေနော်.......အစ်တို Admin ကြီး MrDBA ရေ။
အဲလိုမလုပ်ရဘူးလေ ... ကျွန်တော်ကရုံးမှာ ရာထူးတိုး အော်ဒါထွက်ခါနီးဆိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ .. ခုတော့ ယတြာကျေသွားရင် ဒွတ်ခ :106:
နောက်ပြီး ကျွန်တော်က ရှေးလွန်ပြီးရင် လာမည့်အဆင့်တွေကို စိတ်၀င်စားနေတာဗျ ...
ဟား ဟား ဒို့အစ်ကိုကြီး ၀င်းဦး ရာထူးတိုးသွားတယ်..
ကြားရတဲ့သတင်းအတွက် ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ... ဂုဏ်ယူပါတယ်...
အစ်ကိုကြီး ဒီထက်မက MZ အကျိုး သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဗျာ...
ချစ်သော ညီလေး iceos
MZ အကျိုး ကို ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာ သယ်ပိုး နိုင်ပါစေ..
ရုံး က ရာထူးလဲ တိုး ပါစေ
ဆုမွန်ကောင်း တောင်း လျှက်
၀မ်းသာပါကြောင်း .. ဟီး ဒေါင်ချာစိုင်းနေမှာ မြင်ယောင်သေး .. ဟေးဟေး
MrDBA ဆိုတာ ဘယ်သူမှန်းမသိပေမယ့် ... အင်းးးးးး ဒွတ်ခပဲလို့တော့ တွေးမိပါတယ်။
စင်ကာပူသားတွေက အတိုင်အတောကလဲ ထူပါဘိသနဲ့ ...
သို့သော်လည်း... အဲ ... ပေါ့လေ... အင်မတန် ဂုဏ်ယူ စရာကောင်းတဲ့ တာ၀န်တစ်ခုပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... အားလုံးကို ... ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ဂုဏ်ပြုပြီးရင် ... ပလေဒီယံ ပြု၊ ပလေဒီယံပြုပြီရင် ... သမတပြု ပေါ့ဗျာ....။ခက်တာက ဂုဏ်ရုံနဲ့ ပလေဒီယံ ရုံနေရာမှာကလဲ ထရိတ်ဒါး ဆိုတာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့... ထရိတ်ဒါးပဲ ပြုရတော့မှာပေါ့နော...။
ဟဲဟဲဟဲ...ဂျီးဒေါ်နွား ကျောင်းတယ် သဘော မထားပါတဲ့ Mr DBA ရယ်။
ပျော်စရာကြီးဗျာ ကို Dba ရေ။ ကံကောင်းခြင်းတွေကဆက်တိုက်လာမှာဗျ။ ဒီမှာလဲရာထူးတိုး ၊ အလုပ်မှာလဲရာထူးတိုးဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလဲအစ်ကိုရာ ကျွန်တော်ကတော့၀မ်းသာတယ်ဗျာ။
ကိုကြီး ဒီဘီရေ .....
အလုပ်မှာလဲ ရာထူးတိုးတော့ မယ်ဆိုတော့ MZ အဖွဲ့၀င်တွေကို တစ်၀ိုင်းလုပ် ပေးတော့မယ် ဖြစ်ကြောင်း ... (admin ကြီးအသစ် စက်စက်လေးကို အချွန်နဲ မပေးလိုက်ပါသည်။) :P
ကျွန်တော်ကကို အနေအထိုင်မတတ်တာပါ ကိုတွီတီရယ် ... :2: တစ်ခါလေးဘဲ အမြင်မတော်တာလေးပြောမိတာပါ :106: ဒီလို လုပ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ (
ကိုတွီတီပြောမှ ဂုဏ်ရုံအောက်မှာ ငယ်ငယ်က ရုပ်ရှင်ကြည့်ခါနီး လက်မှတ်တန်းစီရင်း ကြားဖြတ်လို့ရန်ဖြစ်တာကြည့်ရင်း ကြောက်လို့တုန်ခဲ့တာရယ်၊ စမူဆာသုတ်စားရတာရယ် ပြန်သတိရသဗျာ၊ သုံးဘီးကားလေးတွေတောင် ပြန်မြင်ယောင်မိသေး ... :2:
၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါကြောင်း ... ရှေးလွန်ပြီးရင် Admin ဖြစ်တာကိုး ... ကျနော်လဲ စိတ်၀င်စားနေတာ ... ရှေးလွန်ပြီး ... ဘာလွန်မလဲလို့ ... အခုတော့ ရှေးလွန်း Admin ဖြစ်သွားတာကိုး ...
ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင် Mz အကျိုးသယ်ပိုးရင်း ပျော်ရွင်သောဘဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်....:41::41: :41:
ပြောရက်လိုက်တာ ၊ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာတောင်ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတွေပါလာဘီ။
မမလေပြေရေ... နဲနဲတော့လျှော့ဗျာ။ ကျနော့ အကိုဂျီးကိုလဲ နဲနဲ private time လေးပေးပါအုံးဗျာ။
ှနှစ်တစ်ရာဒဲ့၊ အမလေးလေး မတွေး၀ံ့စရာပဲ။ ဘုရား ဘုရား (ဂိုးတား ပဂိုးတား) ကိုဂျီးရေ ဆံဖျားကချွေး ထွက်ဖို့သာပြင်ထားတော့
ဒီတစ်ခါ ဒီဘီ့ မျက်နှာ ကြည့် ပြောရတော့မယ်.. :d
နောက်တောက်တောက်လုပ်နေလို့ကတော့ နားရင်းအအုပ်ခံထိလောက်တယ်... :d
CSS နဲ့ HTML မှာ ဧ၀ံမေသုတံ လုပ်နေတာနဲ့ Front Page ကိုပြန်မကြည့်မိဘူး... နောက်ဆုံးဖြစ်သွားပြန်ပြီ...
ဒင်းတော့ တေဖို့တာပြင်... :P
Congratulation ပါ ကိုDBA ရေ:6:
MZမှာ ကိုDBA လိုတော်တဲ ့လူတစ်ယောက်အက်ဒမင်ဖြစ်လာတာ...အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ:103:
Admin ရာထူးတိုးသွားတဲ့ MrDBA အား ၀မ်းမြောက်၀မ်းသာ ဂုဏ်ပြုပါတယ်။:d
တိုတို DBA... အဲလေ.. ကိုကြီး Admin
ရာထူးတိုးတဲ့ အထိ်မ်းအမှတ်အနေနဲ့ ဘာကျွေးမှာလဲ
ရှေ့မှီနောက်မှီကုလားထိုင်ကြီး ကိုဒီဘီအေ အဖြစ်ကနေ အက်ဒမင်အဖြစ်သို့ ဘ၀တပါးပြောင်းသွားတဲ့အတွက် အားလုံးနဲ့အတူ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ပလေဒီယံနဲ့ ထရိတ်ဒါးတို့တော့ မယူတော့ပါဘူးကွယ်။ ကိုစည်သူပြောသလိုဘဲ ဂန်ဖလားပြုပါတယ်ဗျာ... ဟိဟိဟိ
ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။ အရင်ထက်ပိုပြီး တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိူင်ပါစေ။
ကိုကြီး Mr DBA ကြီး.....ရှေးလွန်မဖြစ်ခင်က ဘာဖြစ်ခဲ့သေးလဲဟင်.....
oh! i am trouble to one more hehehehe !congratulation :6::6:
အခုလိုရာထူးတိုးသွားတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် ခင်ဗျာ...
Thank anyway all